ရှာလို့ရသောရလဒျမြား | Transnational Institute
(-) Remove Democratising Europe filter Democratising Europe
(-) Remove Democratisation filter Democratisation
(-) Remove Just Solutions filter Just Solutions
(-) Remove IMF/World Bank filter IMF/World Bank
Solidarity Economy (2) Apply Solidarity Economy filter
Citizens Alternatives (1) Apply Citizens Alternatives filter
Global economic crisis (1) Apply Global economic crisis filter
Labour and Unions (1) Apply Labour and Unions filter
Privatisation (1) Apply Privatisation filter
(-) Remove အင်ျဂလိပျဘာသာ (English) filter အင်ျဂလိပျဘာသာ (English)
Ireland’s Debt Crisis: Roots and Reactions
29 နိုဝငျဘာလ 2011
The Celtic Tiger might just find its strength and appetite for action in the growth of left leaning electorates and local citizens initiatives. The tailspin of economy caused by austerity policies should be countered byatransparent debt audit.
The public debt crisis in Greece
Marica Frangakis, Nicos Poulantzas Institute, Athens
07 အောကျတိုဘာလ 2011
Every story needsanarrative, an explanation of why things happened the way they did. In suchanarrative lie the answers of how to avoid/correct similar developments in the future and how to propagate positive ones.
Poor recovery, high costs
28 အောကျတိုဘာလ 2010
The Great Recession shows no clear signs of ending, but conservative solutions to it have already wrought great long-term social damage.
Transnational Institute (TNI) သည် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲ၍ တရားမျှတသည့် ဒီမိုကရေစီထုံးနည်းစံကျဖြစ်သော မြေကမ္ဘာကို တည်ဆောက်ရန် သံဓိဋ္ဌာန်ချထားသည့် နိုင်ငံတကာသုတေသနနှင့် မူဝါဒပြောင်းလဲရေး စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုများကို ဖော်ဆောင်လျက်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်ကျော်ကာ လတစ်လျှောက် TNI သည် လူထုလှုပ်ရှားမှုများအကြား သီးခြားဆက်ကြောင်းတစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းကူးပေးလျက်ရှိပြီး ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ မူဝါဒချမှတ်သူများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်